Miyuu AIVD ku naqshadeeyey xeeladaha Bariga Jarmalka (DDR) Stasi ee Nederland?
Stasi wuxuu ahaa sirdoonka ugu muhiimsan ee sirdoonka Jarmalka iyo adeegga amniga intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa, waxaana loo arkaa inuu yahay midka ugu fiican adduunka. Stasi wuxuu ahaa mid qarsoodi ah, waxaana si aad ah u saameeyay KGB ee Midowga Soofiyeeti. Inkastoo Stasi ee 1990 ka dib dhacdadii Berlin Wall ayaa si rasmi ah looga qaaday, [...]
Xoriyadda hadalka, hadalka iyo fikirka waa la tegi karaa sanadka gudihiisa
Haddii aad u maleyneyso "Oh, taasi ma aadi doonto si dhakhso ah", ma aadan fiiro gaarin. Ma qabtaa garbahaaga oo aad ka fikirto: "Hadaad fiican, markaa waxaad dhihi kartaa wax yar oo aad u maleyneyso, Anigu ma ahan qof u baahan inuu fikradayda wax walba iyo wax walba siiyo", [...]
Miyuu jiraa ama ma'yahay xadgudubka caruurta ee cunsuriyadeed iyo caruurta oo dhan?
Faahfaahin yar oo khalad ah ayaa loo baahan yahay in la nadiifiyo. Marka waxaan idinku leeyahay, Ronald Bernard waa actor ah isticmaala farsamooyin NLP si ay u noqdaan farxad Bank in uu ka dhaadhiciyo dadka qaba sheeko soo jiidanaya aragtiyaha shirqool ku biiro, taas micnaheedu ma aha xadgudub in galmada iyo allabari dhaqan ee [...]
The Ronald Bernard debard iyo xakamaynta la xakameeyo ee aragtiyaha shirqoolka
Markii Internetka uu yimid wuxuu ahaa mid fantastik ah oo aanad sugi karin xawaare aad u badan waxaadna heli kartaa oo is dhaafsan kartaa macluumaad dheeraad ah. Dhanka kale, ma naqaano jiilalka dhalinta yar yar waqtigaas oo aysan jirin telefoonada gacanta oo laga yaabo inay tahay waqti xun oo gaboobay oo aanad jeclayn [...]
Ronald Bernard, Irma Schiffers, Ad Broere, Coöperatie Vrije Media: Nirmooyinka badbaadada AIVD ee loogu talo galay kuwa runta ah?
Maqaalkaan waxaan jeclaan lahaa inaan si faahfaahsan uga hadlo sababaha aan ugu qorey qoraal kooban oo ah in warbaahinta kale ee Netherlands ay si buuxda u xakameyso. Anigu waxaan u jeedaa '' xakamaynta adeega qarsoodiga ah '. Nederland, kooxda waxaa lagu magacaabaa AIVD. Si loo cadeeyo in, aad dhab ahaantii leedahay inaad [...]
'Wakiilada Desinfo & VIDEO' VERSUS 'waxay muujineysaa dhibaatooyinka dhabta ah ee dunida oo dhan "
Maanta waa isbeddel dhab ah oo looga hadlayo 'matrixka'. Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sida ay u shaqeynayaan iyo in kale oo ay ka mid yihiin [...]
Faransiiska Heslinga dhulka dusha sare ee dhakhtarka maskaxda ee fikirka muhiimka ah?
Dhab ahaantii, way ka fiican tahay in la iska indha tiriyo noocyada ciyaalka, laakiin Faransiiska Heslinga waxaa hadda lagu riixaa warbaahinta kale iyo warbaahinta caadiga ah, in aad leedahay magacaas. Sida muuqata, PsyOp (hawlgal maskaxeed) oo cusub ayaa loo bilaabay inuu isku xiro nooc kasta oo feker ah oo muhiim ah oo ku saabsan fikradaha caqliga. Qaar ka mid ah [...]
Naqshadda dhulka ee dhulka, macno khatar ah!
Toddobaadkii hore, waxaan si ula-kac ah u soo celiyay 'wax-abuur ah', sababtoo ah si lama filaan ah waxaa jiray xaddi badan oo muran ka dhashay tan iyo 2015. Waa dabcan, aragti dhamaystiran oo ku saabsan pits, taas oo loogu talagalay qof kasta oo aqoon u leh aasaaska aqoonta aasaasiga ah ee xisaabta iyo fiisikiska loo gudbin karo dhulalka xarrago, laakiin soo ifbaxaya dhaq-dhaqaaqa [...]
Aragtida Dunida ama Fikirka Barafka ee Dunida waa PsyOp si ay cilmi-baadhayaasha u dhigaan koox ka mid ah madmen
Internetku wuxuu hadda ku jiraa fiidiyowyo, kanaalada YouTube iyo shabakadaha websaydka kuwaas oo u muuqda kuwo si dhab ah u baaraya sida warbaahinta caadiga ah iyo amarka la aasaasay ay khiyaanaynayaan annaga. Falanqeyntani waxay inta badan ka yimaadaan cilmi baaris wanaagsan. Hase yeeshee, waxa hadda socda, waa in aragtiyahan (aad u xifdisan oo loo nadiifiyo) ay ku xiran yihiin "cilmi-baarayaasha" kuwaas oo [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.352.366